နောင်ရိုးတည်နေရာနှင့် ပတ်သက်၍…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » History » နောင်ရိုးတည်နေရာနှင့် ပတ်သက်၍….
Posted by htet way on Nov 9, 2012 in History | 15 comments
နောင်ရိုးတိုက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ အိမ်မဲမြို့သို့သမိုင်းသုတေသနကအရာ၇ှိနှစ်ဦးရောက်လာခဲ့သည်။သူတို့က အမျိုးသားပြတိုက်နှင့်ကမ္မည်းကျောက်စာဌာနခွဲရှေးဟောင်းသုတေသန၊
စာကြည့်တိုက်ဦးစီးဌာနက လာတယ်တွေ့ချင် နေကြတယ် ဆိုတော့ အစကတော့
မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနမှာစောင့်မည်ထင်မိခဲ့သည်။တွေ့ချင်သည်ဆို၍မိမိကရှာလိုက်သည့်အခါ မြိုစွန်ချောင်းဝပိုင်းတံတားထိပ်ကတံတားဆောက်လုပ်ေ၇းမှာစောင့်ဆိုင်းနေ၍ထိုနေရာ၌ပင် စကားပြောခဲ့ကြသည်။သူတို့နှင့်ပါလာသူကဓါတ်ပုံတွေရိုက်ကြ၊ဆွေးနွေးပြောဆိုကြပြီး သမိုင်းဝင် ရှင်ပင်ချမ်းသာ ဘုရားကြီးကိုဖူးချင်သည်ဆို၍အိမ်မဲမြို့နယ်အသင်းကဦးခေတ်ဟုတ်ကလိုက်ပို့ပေးသည်။ ညပိုင်းနန်းထိုက်တည်းခိုခန်းရဲ့ဧည့်ခန်းဆောင်မှာထိုင်ပြီးဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။
ဆောင်းပါးပါ အချက်များကို မေးမြန်းကြသည်။ကျွန်တော်ကလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိသလောက်ကို ရှင်းပြ ပြောပြ ခဲ့သည်။
ယုံကြည်ချင်ပုံရသည်။အင်းမျောကျွန်းတိုက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်သောနေရာဆိုတာကိုတွေ့ချင်သည်။သုရှင်တကာရွတ်ပိနတ်ရွာစံစဉ်အရိုးအိုးနှင့်စေတီတည်ထားသည့်နေရာကိုတွေ့ပါမှနောင်ရိုးတိုက်ပွဲ ဖြစ်သည့်နေရာဟုလက်ခံချင်ပုံရသည်။ဒါကသူတို့ အပိုင်းဖြစ်သည်။
အိမ်မဲမြို့သမိုင်းဝင်ရွှဘုံသာဘုရားတန်ဆောင်းကိုလည်းလေ့လာခဲ့ကြသည်။အိမ်မဲမြို့က စာရေးဆရာကြီးများရေးသားထားသော နောင်ရိုးနှင့်ပတ်သက်သော စာတမ်းများကိုတောင်း သော်လည်း မိမိမှာ မပေးနိုင်ခဲ့။စာရေးဆရာ အသင်းကို ခေါ်ပေးပါ ဆို၍ ခေါ်ပေးခဲ့ရသေးသည်။
ဒေါင့်ကြီးအနီးဝန်းကျင်၌ရှိမည်ဟုလည်းမှန်းဆနိုင်ပါသည်။ အိမ်မဲမြို့နယ်အသင်း(ရန်ကုန်)က ဦးဆောင်ကျင်းပသော
အိမ်မဲမြို့နယ်အသင်းနှင့်အိမ်မဲနေပြည်သူများကစိတ်ဝင်စားနေကြသည်။ရန်ကုန်မြို့တွင်လည်း စာတမ်းဖတ်ပွဲကို ကျင်းပကြပေတော့ မည်။
ဆရာဒေါက်တာသန်းထွန်းစာအုပ်..”မြန်မာ့သမိုင်းမြေပုံများ” စာမျက်နှာ ၆၉ ကပုံလေး… ကူးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
နောင်ရိုးကို ပြည် နားမှာလို့ပဲ ကြားဖူးထားတာ။
အိမ်မဲမြို့နယ်ထဲမှာ ဆိုတော့ အံ့သြလို့ စိတ်ဝင်စားမိတယ်။
ကျွန်တော် က ဒီမြေပုံကို တနေ့ သုတေသန အဖွဲ့ဆီက ကူးယူထားပါတယ်။
သို့သော် ကော်နက်ရှင် အရ တင် လိုက်တာ ကြာနေလို့ ကိစ္စကလည်းရှိနေတော့ ဆောင်းပါးမှာ မြေပုံမပါတော့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သူကြီး မင်းခင်ဗျား။
ဆရာမ ..မမ ခင်ဗျား
၁၈ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံ ဘုရားနားက ဧရာဝတီဆောင် လို့ပြောပါတယ်
အဲ့ဒီမှာစာတမ်း ဖတ်ပါ့မယ်။ကျွန်တော့် ဆီကိုတော့ ဖိတ်စာပေးလိုက် ပီ လို့ ရန်ကုန်က ဖုန်း
ကျွန်တော် မြို့က ဦးဆောင်သူတွေက ကျွန်တော့်  လက်ထဲတော့ မထည့်သေးပါ ခင်ဗျား။
ဆရာမ စိတ်ဝင်စားလို့ အားမယ်ဆို အခမ်းအနားကို တက်ပါလို့။အိမ်မဲမြို့နယ် အသင်းကလုပ်တာပါ။
“အင်အားကြီးတဲ့ ရန်သူတွေ နဲ့ တိုက်တာမှာ နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်လို့ ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိ လို့လား၊ မနိုင်ရင် သေတာမှ မြတ်သေးတယ်လို့ သဘောထားလို့လား” …
စိတ်ဓာတ်အင်အားကို သုံးပြီး ဘုရင့်နောင်ဖောင်ဖျက်ပြီး တိုက်တာ နောင်ရိုး တိုက်ပွဲ လို့ သိဖူးခဲပေမဲ့ နောင်ရိုး ဆိုတာ ဘယ်အရပ်လို့ မလေ့လာခဲ့မိပါဘူး။
ဆရာထက် ကို ရော၊ မြေပုံ တင်ပေးသူ သူကြီး ကိုပါ ကျေးဇူးပါရှင်။
ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ဘုရင်နောင် ဖောင်ဖျက်တိုက်သလို ဆိုတဲ့ စကားက ကျနော့် အတွက်တော့ မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ရမယ်၊ လုပ်မှဖြစ်မယ်၊ အောင်မြင်ရမယ် ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အား ရစေပေမယ့် ဘုရင့်နောင် တိုက်ခဲ့တဲ့ နောင်ရိုး တိုက်ပွဲ ဘယ်နေရာမှာ တိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ တကယ်ကို မသိခဲ့တာ။ အစ ဆွဲထုတ်ပေးတဲ့ ဆရာထက်ရေ..ကျေးဇူး ဗျာ။
ဘုရင့်နောင်ကျော်ထင်နော်ရထာ ရဲ့နောင်ရိုးတိုက်ပွဲကို ကြားဖူးခဲ့တာတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းကပါ
ဒါပေမယ့် နောင်ရိုးကဘယ်နားမှာရှိတယ်ဆိုတာတော့ သတိမထားမိခဲ့သလို ဘယ်သူကိုမှလည်း
မေးမကြည့်ခဲ့ဖူးပါဘူး အခုလိုသိခွင့်ရတော့ ဗဟုသုတ ဧကန်ဖြစ်ရတာပေါ့ဗျာ ဒီပို့စ်ကို ရေးတဲ့ကိုထက်ဝေ
ကိုရော မြေပုံတင်ပေးတဲ့ ဥက္ကဌ (ယခုရပ်ကွပ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူ) ကိုပါမကျန် ကျေးဇူးတင်ထိုက် သူအားလုံးကို
ဘုရင့်နောင် ဖောင်ဖျက်တာနဲ့ပတ်သတ်လို့ အရမ်းလေးစားမိပါတယ်။
“ဘုရင်နောင် ဖောင်ဖျက်တိုက်သလို ”
“သေရင်မြေကြီး ရှင်ရင်ရွှေထီး”…ဆိုတဲ့ စကားတွေ ကြားဖူးခဲ့
အခုလည်း လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ နောက်ပြန်မလှည့်ဘူး
ဘာရယ်မဟုတ်..ကိုထက်ဝေး စာလေးဖတ်ရင်းအတွေးဝင်လာမိတာပါ… :bar:
အပေါ် ကလူတွေ ပြောခဲ့ ကြသလို ပါပဲ ။ ဘုရင့် နောင် ဖောင်ဖျက် ဆိုတဲ့ စကား ကို တွင်တွင် သုံး ဖူး ပေမယ့် အဲ့ဒီ အဖြစ်ရဲ့ ဇစ်မြစ် အစ နောင်ရိုး တိုက် ပွဲ ရှိ ရာ အရပ် ကို အမှု မဲ့ အမှတ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ တယ်။ ပြည်နားတ၀ိုက် လို့ ပဲထင်ထား မိတာ။ဘုရင့် နောင်တို့ ဖောင် ဖွဲ့ ပြီး ကူးတဲ့ မြစ် လည်း ခုမှ ပဲ သိတော့ တယ်။
အခုလို အားပေးကြတဲ့ ဆရာတွေ ၊ ဆရာမတွေ ကိုလေးစား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် တို့ကတော့ ဇာတိမာန် အရရော၊ သမိုင်း အထောက်အထားရရော
နောင်ရိုးတိုက်ပွဲ ဆိုတာ အိမ်မဲမှာ ဖြစ်တာတော့ သေချာနေပါတယ်။
အိမ်မဲကို.. နောင်ရိုးလို့..အမည်ပြောင်းပေးဖို့.. ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆီ တောင်းသင့်ပါတယ်..
“နောင်ရိုးဇာတိနွယ်.. . အိမ်မဲသားတွေအတွက်.. ဂုဏ်ယူပါကြောင်း..။”
အိမ်မဲ ဆိုတာ ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ် ဆိုတဲ့ ရာဇ၀င်လည်း ပြန်လှန်ဖို့ လိုမယ်ထင်ပါသည်။ နောင်ရိုးဖြစ်ချင်တာနဲ့ အိမ်မဲ ရာဇ၀င် ရှိခဲ့ရင် ပျက်သွားဦးမယ်..
အ်ိမ်မဲစာရေးဆရာ အသင်းကြီးကဒီ တာဝန်ရှိပါတယ် သူတို့တွေ ရေးကြပါလိမ့်မယ်
ကျွန်တော်လို ကချိကချောက် က ရေးရင် မသင့်တော်သေးလို့ ဆရာကြီးတွေ
ဘုရင့်နောင်ဖောင်ဖျက်ဆိုတဲ့စကားလေးက ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြားဖူးခဲ့တဲ့စိတ်ဓါက်စစ်ဆင်ရေး စကားလုံးလေးပါပဲ။ အင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့ အသေခံ စိတ်ဓါက်စစ်ဆင်ရေး တခုဖြစ်ပြီး ဒီစိတ်ဓါက်စစ်ဆင်ရေးနဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဓါက်ကို နှိုးဆွပေးလိုက်တဲ့အခါ ကိုယ်ထက်အင်အားအဆများစွာကြီးတဲ့သူတွေကို အနိုင်တိုင်နိုင်ခဲ့ပြီး သမိုင်းမှတ်တမ်းမှာ ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေရာမှ တခုသတိထားမိတာက စိတ်ဓါက်စစ်ဆင်ရေးတခုတည်းနဲ့ပဲ နိုင်နိုင်မလားဆိုတာပါပဲ ။ ဥပမာအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းကို ဒီလိုစိတ်ဓါက်မျိုး သွင်းပေးပြီး ပရီးမီးယားလိ အသင်းတွေနဲ့ကစားရင်နိုင်နိုင်မလား ???
နောင်ရိုးတိုက်ပွဲအောင်မြင်ခြင်းဟာ ဘုရင့်နောင်ရဲ့ စစ်သည်များရဲ့ training ဟာ လည်း ရန်သူတွေထက် သေချာပေါက် သာမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်စစ်ရေးစွမ်းရည်ပြည့်ဝနေတဲ့ စစ်သည်များကို မနိုင်ရင်အသေခံမယ်ဆိုတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဓါက်နဲ့ ကီ သွင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အင်အားများစွာသာတဲ့ရန်သူကို အောင်မြင်ခဲ့တယ် လို့ထင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေမှာ နောင်ရိုးတိုက်ပွဲ အောင်မြင်ရခြင်းဟာ ဘုရင့်နောင်ရဲု့စစ်ရေးစွမ်းရည်ကို လစ်လျှူရှူ့ ပြီး စိတ်ဓါက် စစ်ဆင်ရေး နဲ့ပဲအောင်မြင်ခဲ့ သလိုမျိုးများဖော်ပြထားလေသလားလို့ထင်မိတယ်။
နောက်တခုက နောင်ရိုးတိုက်ပွဲဆိုတာကို တောင်ငူဘက်နားမှာပဲလို့ ထင်ထားခဲ့တာ။ အိမ်မဲနားမှာဆိုတော့ တော်တော်လေးအံ့သြသွားတယ်။